Koomadii Maka Soo Baxday Mise…..W/Q:-Yuusuf Garaad. |
Koomadii Maka Soo Baxday Mise…..W/Q:-Yuusuf Garaad.
Muqdisho(GNN):-Waxaan halkaa ka arargnaa in aan su’aashu munaasab ahayn. Kooma qofka ku jira waa qof dhaawac ka gaaray maskaxda awgiis densan oo la moodo in uu hurdo.
Waxaan halkaa ka arargnaa in aan su’aashu munaasab ahayn. Kooma qofka ku jira waa qof dhaawac ka gaaray maskaxda awgiis densan oo la moodo in uu hurdo. Lagana kicin karin xataa haddii loo adeegsado
wax qof caafimaad qaba oo hurda xanunjin lahaa.